Wariye Boosh Iyo Xasan oo Hargeysa ku Xidhan, ka Dib Kolkii ay Daabaceen War in Ciidan ay Leedahay UBO ka Soo Dageen Xeebta Maamulak SNM. – Rasaasa News
Feb 22, 2012 Eritrea, ethiopia, ONLF, Somali, warar
Hargaysa, February 22, 2012 [ras] – Wariye Maxamed Cabdi Xasan [Boosh] iyo wariye Xasan Cumar Xasan oo ka kala tirsan wargeysyada madaxa banaan ee Ogaalnews iyo ramaasnews oo labadii maalmood ee u dambeeyay ku xidhnaa xarunta SNM Hargeysa, ayaa loo wareejiyey xabsiga dhexe.
Labadan Wariye oo doraad loo xidhay baahinta warar xaqiiq ah oo laga helay ilo wareedyo gaar ah, ayaa islamarkiiba loo diray xabsi deg deg ah oo todoba maalmood ah. Sida ay wararku sheegayaan saaka ayaa laga wareejiyey xarunta dhexe SNM oo ay hore ugu xidhnaayeen, loona wareejiyey dhanka jeelka dhexe ee Hargeysa.
Labadan wariye oo lagu xidhay amar ka soo baxay wasiirka arimaha gudaha Maxamed Nuur Carraale (Duur) ayaa maalintii saddexaad ku jira gacanta ciidamada amaanka, iyadda oo wasiirka arimaha guduhu ka war wareegayo xalkii laga gaadhi lahaa xadhiga labadan wariye.
Sababta xabsiga loogu hayo labada wiil ayaa laga yaaban yahay in ay sheegaan warar kale oo dheeraad oo ku saabsan warkan lagu xidhay oo sidan u qoraa;
Hargeysa, February 20, 2012 (Mareeg.com): Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya deegaan xeebeedka Buulla-cado oo ka tirsan deegannada Somaliland ayaa sheegaya in halkaas ay ka soo degeen ciidamo hubaysan oo ka tirsan jabhada ONLF ee dagaalka kula jirta dawlada Ethiopia.
Ciidanka ka tirsan ONLF oo tiradooda lagu qiyaasay 30-50 nin ayaa shalay goor dambe ka degaya xeebtaaas sida ay sheegayaan dadka deegaanka ee halkaas ku nool.
Ciidaman lagu sheegay iney ka tirsan yihiin Jabahadda ONLF ayaa loo badinayaa iney tababaro Milatari ku soo qaateen dalka Eritrea oo xarun u ah mucaaradka hubaysan ee kasoo horjeeda maamulka dalka Ethiopia.
Ciidamadan ayaa markii ay ka degeen xeebta Buulla-cado waxay u jiheysteen dhulka dhanka Waqooyi kaga beegan deegaanka Xariirad, halkaas sida muuqata ay uga sii gudbayaan gudaha Ethiopia, si ay halkaas uga qeybqaataan dagaalka Jabhadoodu kula jirto milateriga Itoobiya.
Qaar ka mida dadka deegaanka ayaa u sheegay qaar ka mid ah warbaahinta Somaliland in ay arkayeen rag hubaysan oo ku sugnaa xeebta ku dhaw Buulla-cado oo ah deked dabiiciya, kuwaasoo ka soo degayay doon yar oo taagnayd gudaha badda.
Taliska xeebaha ciidanka Somaliland ayaan weli ka hadlin wararka soo baxay ee sheegaya in xubno askar ah oo ka tirsan ONLF ka soo degeen qeybo ka mid ah xeebaha Somaliland, si ay uga sii gudbaan Itoobiya.
Ciidamada Jabahadda ONLF ayaa mararka qaar kasoo dega deegaannada Somaliland marka ay tababarro kusoo qaataan dalka Eritrea, iyagoo markaas mara buuraleyda Maar-Maar oo ku dhaw xuduuda saddex geesoodka ah ee u dhaxaysa Somaliland, Ethiopia iyo Djibouti.
Dhamaadkii sannadkii 2010-kii ayay ahayd markii in ka badan 250 askari oo ka tirsan ONLF ay ka soo degeen xeebta Buulla-cado, kuwaasoo galay gudaha Ethiopia, taasoo keentay inuu wiiqmo xiriirka Maamulka Somaliland iyo dawlada Ethiopia.
Qabridahare: Jaamacad Geel Lagu Dhisayo iyo Qurba-joog Dhagax Dhigtay